Ma Kireysan Karaa Garoonka Kubbada? – Wajibad
Ma Kireysan Karaa Garoonka Kubbada?
Ma Kireysan Karaa
Su’aasha | 215
”Weydiyahaan waxa uu leeyahay Sheekh in aan garoon kubadda lagu ciyaaro kireysto oo aan lacag ka dhiibo si aan dhidid isaga keeno aniga oo iska ilaalinaaya wax yaabaha xaaraanta ah lacagtaas ma dhiibi karaa?”
Jawaabta | 215
Tu kalena ku dar, adiga inaad ku ciyaarto oo aad lacag iska bixiso waa mid. Mid inuu garoonkaba hagaajista (Tusaale):
Dhulkaagii baad garoon banooni ka dhigtay, dadka ayaadna ka kireysaneysaa banooniga ciyaaraya ama ku ordaaya ma banaan tahay?
Marna waa kii intifaac sanaayay
Marna waa kii kireysanaayay
Marka waa kii ka kireysanaayay
Ma u banaan tahay waaye su’aasha?
Jawaabtu waxa weeye ciyaarta banoonigu;
Marna waa xaaraan
Marna waa (Mubaax) iska banaan
Goormeey xaaraan tahay?
Waxay xaaraam tahay markii (Cawro) la baneeynaayo oo leys qaawinaayo, ileyn ragga cawradooda waa inta laga gaadho (lowga) inta laga gaaro ilaa iyo xudunta inta u dhaxaysa. Hadii markaa saraawiil gaagaaban lagu ciyaaro oo cawrada la baneeyo waa xaaraan.
Waajibaadkii diinta hadii la dayaco (Salaaddahii) baa kugu dhaafayo (Dalabkii Cilmiga Sharciga Waajibka) ahaa ayaa kugu dhaafayo iyadana waa xaaraan.
Mathalan waxbaa lagu kala qaadanaayaa banooniga la ciyaarayo kooxaha ciyaarayo lacag ama xoolo ayay ku kala qaadanaayaan tartan kaas waa xaaraan.
Naska xadiithka Nabigaﷺ ayaa ku tusaayo.
Xaalaadkaa banooniga ciyaartiisu ee xaaraanta yahay in aad lacag ku bixiso meesha lagu ciyaarayo iyo inaad adigu lacag ka qaatado oo meesha ka kireysato labadaba waa xaaraan.
Li’ana waxa aad (ciwadku) ku qaadaneyso waa (camal muxaram) ah.
Sooma aha wixii kaa soo galay iyo kan bixiyay wuxuu ku bixiyay labaduba xaaraan bey noqoney.
Xaaladna banoonigu waa (mubaax) oo waa iska banaan yahay, waa markii (maxaadiirta) shardiga ah meesha ka baxdo, meelaha shareecadu diiday.
Waa dad asturan,
Waajib ma dayacaayaan,
Lacag kuma kala qaadanaayaan,
Wey ku jimicsanaayaan.
Markaas oo kale haday tahay meesha aad ku ciyaareeyso inaad kireysato wey kuu banaan tahay inaad lacag ka bixiso.
Kii meesha lahaay (Garoonka) ee diyaarsaday inuu isaguna kireysto oo lacag ku qaato wey u banaan tahay.
Sababta maxay tahay li’ana waxa lagu sameynaaya baa shareecada ku banaan oo (mubaax) ah. Wax yaabaha mubaaxa ee shareecada ku banaana, dhul kaaga iyo gurigaaga waad u kireyn kartaa lacagna waad kaga qaadan kartaa, kan u baahana wuu kireysan karaa lacagna waa ku bixin karaa.
Sidaasaa marka loo kala qaadayaa oo xaalada marka banooniga xaaraamta yahayna waa xukun, xaalada uu iska banaan yahayna waa xukun kale.
Ciyaaraha, Ciyaaraha Sportiga, Kubada